Technorati အဆင့် WordPress ပလပ်အင်ဗားရှင်း 2.0.4 ထုတ်ပြန်သည် Martech Zone
Technorati အဆင့် WordPress ပလပ်အင်ဗားရှင်း 2.0.4 ထုတ်ပြန်သည်
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 22, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ငါ (နောက်ဆုံး) နဲ့ပြanနာကိုတညျ့ပါတယ် Technorati အဆင့် WordPress ပလပ်အင် ၎င်းသည် cache ဖိုင်တစ်ခုကိုရေးသားရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြcorrectနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ငါ plugin သို့ cache ကို subdirectory ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ယခု cache file ကိုထို directory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ဤပလပ်အင်သည် PHP5 + လိုအပ်သည်။SimpleXML) ပြီးနောက် ဆံပင်ကောက်ကောက် စာကြည့်တိုက်။ သင်၏အိမ်ရှင်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးမရှိပါကကျွန်ုပ်အားသင့်အားအိမ်ရှင်အသစ်သို့အဆင့်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သင်ကူပွန်အတွက်ကူပွန်ကိုတွေ့လိမ့်မည် အခမဲ့တစ်နှစ် ငါ၏အအိမ်ရှင်နှင့်အတူ hosting ၏ RSS feed.
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ဤပလပ်အင်ကိုဂရပ်ဖစ်စတိုင်လ်အသစ်တစ်ခုဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်လုပ်ဆောင်နေသည် (ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) Technorati အဲဒီမှာအချို့အကူအညီတောင်းဘို့!) ။ ငါ၏အအားလပ်ချိန်မှာအားလုံး - ၏သင်တန်း!
ဧပြီ 22, 2007 မှာ 3: 48 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ Technorati အသုံးပြုသူအမည်မှာ gavino ဖြစ်သည်။
သင်သည်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏မျက်နှာသာပေးမှုတွင်ထည့်နိုင်သည်။
ဧပြီ 23, 2007 မှာ 4: 44 pm တွင်
ငါ့ကိုမိုက်မဲတယ်လို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ IT သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။
ငါ Technorati Rank plugin ကို install လုပ်ပြီးပြီ။
ဧပြီ 23, 2007 မှာ 5: 02 pm တွင်
အားလုံး chinam မှာရီစရာ! Technorati နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်ပလပ်အင်သည်ရလဒ်မိတ္တူတစ်စောင်ကိုလမ်းညွှန်တစ်ခုသို့ရေးသားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကို 'cache' လို့ခေါ်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ပလပ်အင် / cache လမ်းညွှန်သို့ရေးသားရန်သင့်တော်သောခွင့်ပြုချက်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုလမ်းညွှန်တွင်ခွင့်ပြုချက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၊ သူတို့သည်အပြည့်အဝခွင့်ပြုရန်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် (CHMOD 777)
ဧပြီ 28, 2007 မှာ 8: 03 AM
သင်၏ WP plugin အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းအမှားပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ admin interface မှာအမှားသေးသေးလေးတစ်ခုတွေ့ပြီ။ cache select box သည်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒါကမင်းရဲ့လိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်
လျှင် (($ wptr_hours == "4") || ($ wptr_hours = ""))
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသောအမှု၌ရွေးချယ်မှုတင်ထားရန်။ $ wptr_hours ၏တန်ဖိုးကိုသုညဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသည်။ assignment ကိုမဟုတ်ဘဲဒုတိယကိစ္စတွင် 'နှိုင်းယှဉ်မှု' လိုအပ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည် $ wptr_hours ၏တန်ဖိုးကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်၊ 'ပုံမှန်အားဖြင့်။ ဒါကကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဧပြီ 28, 2007 မှာ 10: 16 AM
ဒန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပြုပြင်မွမ်းမံလုပ်။ v 2.0.5 တင်ယူ။ :
လျှင် (($ wptr_hours ==? 4?) || ($ wptr_hours === null))
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 00
ဒီ plugin အတွက်ဒေါက်ဂလပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ဟာ Technorati မှာ goode အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာငါမြင်နိုင်တယ်။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်!
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 35